नेपाल आज | चीनमा बनेको कण्डम साँघुरो!
चीनमा बनेको कण्डम साँघुरो!
एजेन्सी – जिम्बावेका स्वास्थ्यमन्त्री डेभिड परिरेन्यात्वाले चीनमा बनेको कण्डम अफ्रिकी मुलुकका पुरुषहरुका लागि निकै सानो भएको बताएका छन् ।
प्रतिवेदनहरुका अनुसार चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कण्डम उत्पादक हो, जसले बार्षिक तीन अर्ब गोटा कण्डम बनाउने गर्छ । अहिले चीनमा झन्डै ३०० वटा कण्डम उत्पादक कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् ।